HomeWararka CaalamkaMobilka ugu wanaagsan Dunida oo la Soo saaray iyo Dunida oo Maanta aad Looga hadal hayo (Sawiro)
December 31, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Waxaa soo socdo Telephone kii Telephone nada ama Mobile kii Mobile lada 2022. Tesla Smart Phone PI.
Elon mask oo ah ninka Dunidan ugu taajirsan hantidiisana lagu qiyaaso aduun lacageed oo ka badan $300 Billion ayaa qorsheynaya in sanadka 2022 uu ooda kasoo qaadi doono Mobile kii Mobile lada oo lagu magacaabo (Tesla PI) waxaana la hadal yahaa in mobile kan cusub uu daaqada ka saari doono suuqana kala wareegi doono Campany yadi mobile lada kale sida IPhone, Samsung Iyo Huawei Iyo kuwa kale.
Dadka heesta Telephone kan cusub ayaa ka maarmi doona ku xirnaashaha shirkadaha bixiya adeega internet ka wuxuuna telephone kan cusub toos ugu xirnaandoonaa dayax gacmeedka (Satellite) isagoo isticmaalaya adeega star-link. Waxaa uu soo afjari doonaa antenna kaa tagta ama Kaa la ciifta, xitaa hadaad joogto bartamaha saxaraha, sidoo kale majiri doonto in internet ka aad shirkad kale ka iibsato maadaama uu telephone kan isaga toos ugu xiranyahay dayax gacmeedka.
Wuxuu kale oo mobile kan cusub dheeraan doonaa mobile ladi horay ujiray qeebta wax keedsiga (storage) ka maadaama uu lahaan doono (2TB ama 2 terabyte store) oo qaadi karta xamuul aad uga badan kuwi hore.
Mobile kan ayaa dadka heesta gawaarida Tesla usahli doona in ay gaarigooda kicin karaan, damin karaan, albaabada ufuri karaan ila markaana uxiri karaan ayagoo ka fog gaariga waxaa kale oo ay awoodi doonaan in ay gaariga parking udiraan ama ka dalbadaan in uu soo doono isagoo awood usiinaya gaariga in uu locate gareeyo ama garto goobta uu teeganyahay telephone ka Tesla.
Telephone kan cusub ayaa sidoo kale yeelan doona camerada camerooyinka oo leh cabir dhan 108MP (megapixel) sida camerooyinka waaween ee loo yaqaano professional cameras. wuxuuna awood uyeelan doonaa in uu soo muujiyo ilaa xaada qofka ama dhibic kasta oo aanan horay uga muuqan jirin jirka.
Cabirka shaashada telephone kan cusub ayaa noqon doonta 6.5-inch 4K-level screen oo ah shaashad cabirkeedu dheeli tiranyahay, waxaana qiyaasta qiimaha telephone lagu iibin doono ay tahay $800 ilaa $1,200.
Elon mask waa ninka iska leh shirkadaha Tesla Cars oo ag gawaarida ku shaqeeya korontada Iyo SpaceX oo ah shirkada hawada sare uganta dayax gacmeedka.
Qore: Abdirahman Adan Osman (Kampala).
Mid kamid ah Midowga Musharixiin oo Ka horyimid Qaabka Midowga Musharixiintu Wax ku Donayaan